‘नेपाली बिग्रेकै सजिलो खोजेर’
इन्ट्रोः काठमाडौँ, चाबहिलस्थित सेन्ट लरेन्स कलेजको क्यान्टिनमा खाजा खाँदै पुरन पोखरेल, लाक्पा डोल्मा शेर्पा, समब्रिना गोले, रञ्जन बस्नेत, अस्मिता लामा, पूजा तिमल्सिना र प्रविना मैनाली गफिँदै थिए । उनीहरू सबै कक्षा १२ विज्ञान संकायका विद्यार्थी हुन् ।
पुरनः प्लस टूको बोर्ड आउन लागिसक्यो । बोर्ड सकिएपछि के गर्छौ त साथीहरू ?
अस्मिताः के गर्नु ? छ महिना बिदा हुन्छ । बिन्दासले रमाइलो गरिन्छ अनि विदेश गइन्छ ।
लाक्पाः हैट । हावा कुरा नगर न अस्मिता । छ महिना थोरै समय होइन । त्यो समयमा त केही सीप पो सिक्नुपर्छ वा कुनै कोर्ससोर्स गर्नुपर्छ ।
प्रविनाः म त आएलस गर्ने हो ।
समब्रिनाः आजभोलि के भाको हो ? हरेकको दिमागमा आएलस मात्र छ ।
पुरनः ब्वाइफ्रेन्ड उतै छ कि क्या हो तिमीहरूको ? १२ सक्नेबित्तिकै अस्ट्रेलिया जानुपर्ने ।
प्रविनाः हो नि !
रञ्जनः डिपेन्डेन्टमा जाने होला नि ! बायो पढ्ने केटीहरू नर्स पढिहाल्छन् ।
अस्मिताः जाने हैन लाने हो ।
पूजाः भनेपछि अस्मिताको अस्ट्रेलिया जाने सोच रैछ ।
पुरनः यता पैसा कमाइँदैन, उता डलरमा पैसा पाइन्छ । अनि, गइहाल्छ नि ! अस्ट्रेलियामा डलर पाएपछि भाँडा माझ्न पनि रमाइलो हुन्छ साथीहरू । त्यही काम नेपालमा गरे कति राम्रो हुन्थ्यो ।
लाक्पाः त्यहाँ भाँडा माझेर डलर आउँछ । यहाँ भाँडा माझेर पेट पाल्न पनि पुग्दैन ।
रञ्जनः नेपालमा भाँडा माझ्नु त ‘लो’ लेभलको काम भन्छन् । अझ, पढेलेखेकाले भाँडा माझ्न थाले भने सोसल मिडियामा ट्रोल बन्छ । बिल्ला नै गर्छन् ।
समब्रिनाः यहाँ जे काम गर्दा पनि फलानोले यस्यो गर्यो भनेर कुरा गर्ने धेरै छन् । केटीले यस्तोउस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने वाहियात सोच अझै पनि छ । यस्तो सोचले नै हो नेपाली बिग्रेको ।
प्रबिनाः नेपालमा बसेर भाँडा माझ्नु भनेको हाँसोको पात्र बन्नु हो । विदेश गएर भाँडा माझ्नु बेस छ ।
पूजाः नेपालमा कामको सम्मान छैन । यदि यहाँ कामको सम्मान भए कमै नेपाली विदेश जान्थे होलान् ।
पुरनः जेजस्तो भए पनि म चाहिँ अरूको देशमा गएर भाँडा माझेर, ट्वाइलेट सफा गरेर पैसा कमाउँदिनँ ।
रञ्जनः विदेश जान्न भन्ने सोच त राम्रो हो । नत्र, आजभोलि चारपाँच कक्षाका बच्चा पनि ‘ठूलो भएर विदेश जान्छु’ भन्छन् ।
अस्मिताः हो भन्या, सानो हुँदा ‘तिमी के बन्छौ ?’ भनी सोध्दा हामी डाक्टर, पाइलट भन्थ्यौँ । अहिलेका केटाकेटी त सीधै विदेश जाने भन्छन् ।
पुरनः मेरो लक्ष्य त डाक्टरबाट कन्डक्टरमा पुगिसक्यो ।
पूजाः रिजल्ट बिग्रेर होला । (सबै जना हाँस्छन्)
रञ्जनः धेरै नेपाली विद्यार्थी अस्टे«लिया जाने टे«न्डले आजकल अस्टे«लियामा ढुंगा हान्दा कि चरालाई लाग्छ रे कि नेपालीलाई ।
प्रबिनाः रञ्जनलाई फेसबुकको ट्रोल राम्रै लागेको छ है ?
रञ्जनः सोसल साइटले नै लोभ्याएको त हो नि नेपालीलाई । त्यहाँ कति राम्रा–राम्रा फोटो हाल्छन् । त्यहाँको दुःख यहाँ बसेर देखिन्न । त्यसरी दिनरात नेपालमा दुःख गर्ने हो भने नेपाल पनि अस्टे«लिया बन्थ्यो कि ?
लाक्पाः हुन त हो तर के गर्ने ? नेपालमा जोखिम लिने आँट कसैले गर्दैन ।
अस्मिताः नेपाली बिग्रेकै सजिलो खोजेर हुन् । अस्टे«लियाको चिप्लो रोडमा कार गुडाउन छोडेर यहाँ भत्केको बाटोमा को हिँडोस् ?
लाक्पाः त्यहाँ फ्रिडम हुन्छ रे ! मोज हुन्छ रे ! यही सोचले त विदेशको भूत चढेको नेपालीलाई ।
रञ्जनः अहिले एक घरबाट एक जना विदेश नगएको भेट्नै गाह्रो छ ।
समब्रिनाः हामी नेपाली अल्छी छौँ । अहिलेसम्म एउटा झिंगा नमारेका हामी वीर गोर्खाली भन्दै शानले बस्छौँ । हामीले गर्न सक्ने त्यही मात्र हो ।
पुरनः त्यही त इतिहासको पाना पल्टाएर आजको नेपाल कहाँ बन्छ र ? बरु, नेपाललाई पनि ब्रिटिसले कब्जा गरेको भए केही हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको छ मलाई आजभोलि । कमसे कम विकास त हुन्थ्यो ।
रञ्जनः सही कुरा ग¥यो, पुरन । नेपालीहरू अरूको देशमा गएर उनीहरूका लागि दिनरात पसिना बगाइरहेका छन् । बरु, ब्रिटिसले कब्जा गरेको भए आफ्नै देशमा जस्तो काम भए पनि गर्न पाइन्थ्यो ।
पूजाः अहिलेसम्म जेजति विकास भए, हामी नेपाली एक्लैले कहाँ गर्न सकेका छौँ र ? जहाँ जे गरे पनि चीन, जापान, भारतको सहयोगमा भनेर सुनिन्छ । झन् विदेशी त नेपालमा जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि रेडी हुन्छन् रे !
रञ्जनः तिमीहरूले सुनेका छैनौ ? विदेशीहरू ‘नेपाल इज भर्जिन ल्यान्ड फर अल बिजनेस’ भन्छन् रे ! नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सम्भावना छ । तर, दक्ष जनशक्तिजति विदेशमा जान्छ, त्यहाँ दुःख र मेहनत गरेर विदेश बनाइरहेको छ ।
पुरनः विदेश जानु, पढ्नु अनि आफ्नो देश फर्केर केही गर्नु यसो गर्दा चाहिँ ठीक हुन्छ । लक्का जवान सबै विदेशमा, बुढापाकाजति नेपालमा भएपछि कसरी बन्छ नेपाल ?
समब्रिनाः अब त काठमाडौँमा घरजग्गा, सम्पत्ति भएर पनि कति बुढाबुढी एक्लोपनले आश्रम जान थालिसके ।
पूजाः यस्तै ताल हो भने पाँच वर्षमा नेपालमा कोही युवा रहदैनन् ।
पुरनः त्यही भएर म विदेश जान्न । बरु, राजनीतितिर लाग्छु । नेपालमा मजस्ता युवाको खाँचो छ । पख न, अब म बनाउँछु देश । अहिलेका ६० वर्ष नाघेका नेतालाई के थाहा वर्तमान आवश्यकता ?
अस्मिताः ल, ल, हेरौँला तिमी नेता भएको । त्यतिबेलासम्म मेरो पढाइ पनि सकिन्छ, फर्केर आउँला तिमी नेता भएको हेर्न ।
पुरनः तिमीहरू विदेश गयौ भने मलाई भोट कसले हाल्छ ? त्यही भएर तिमीहरू पनि नेपालमै बस्नुपर्छ ।
पूजाः ल, ल, तिमीलाई जिताउन भए पनि नेपालमा बसौँला । देश राम्रो भयो भने किन जानु विदेश ?